Iindaba -Izibonelelo ezintlanu zeebhotile zeglasi kwintengiso yokupakisha
Okwangoku, kwicandelo lokupakisha kwimakethi yasekhaya, izinto zokupakisha zezinto ezahlukeneyo, ngakumbi iplastiki (ulwakhiwo: i-resin eyenziweyo, iplasticizer, uzinzo, umbala) ukupakishwa kwebhotile, kuhlala isiqingatha sentengiso esezantsi kumzi mveliso wesiselo. Jiangshan, ikakhulu ngenxa yexabiso eliphantsi, ukuthuthwa ukukhanya, kunye nohlaziyo lula iibhotile zeplastiki. Ingxaki ye-phenol A (Emerson) kwiibhotile zeplastiki ezivezwe ngokuphindaphindiweyo ikwabangela ukuba abathengi abaninzi (abathengi) baqwalasele ngakumbi iziselo ezifakwe kwiibhotile zeglasi xa bekhetha iziselo zokuzisebenzisa, kuba ukupakishwa kwebhotile yeglasi akubonisi kuphela imeko ephezulu, kodwa ikwadlula (tōng guò) Uhlolo lwesebe lokuhlola umgangatho likupakisho lwezinto ezithembekileyo ngabathengi.
Ukuphulukana ngokuthe chu nabathengi kuvuse ukubekwa esweni kweenkampani zotywala ebezisebenzisa iibhotile zeplastikhi ukupakisha. Abanye babavelisi ababona kude baye bazishiya iibhotile zeplastiki batshintshela kwibhotile yeglasi yokupakisha. Nangona iyonyusa iindleko zemveliso ekuqaleni, imakethi iya kuba nexesha elithile lokuziqhelanisa. Ukuqwalaselwa kwexesha elide kufanelekile. Ukuba iinkampani zemveli zifuna ukuphumelela iimarike ixesha elide, kufuneka zitshintshe kwaye zilungelelanise kuphela. Iintliziyo zabantu zingaphumelela kwintengiso. Isizathu sokuba ukupakishwa kweglasi kuya kuphumelela ngokuthe ngcembe kwinxalenye enkulu yesabelo sentengiso kwaye kuthandwe ziinkampani zokupakisha kufuneka zinezibonelelo zazo.
Makhe ndikwazise ukuba zeziphi izibonelelo zokupakishwa kwebhotile yeglasi:
(1) Izinto zeglasi zinepropathi ekhokelekileyo engenabungozi, kwaye ikwanazo neepropathi zokuthintela ezilungileyo, ezinokuthintela igcwala kunye nokhukuliseko lwezinto ezikwibhotile ngeegesi ezahlukeneyo, kwaye zinokuthintela ngokufanelekileyo ukungazinzi kwemixholo. Izithako ziyenyuka zibe ngumphunga;
(2) Iibhotile zeglasi zinokuphinda zisetyenziswe kwaye zisetyenziswe rhoqo, ukunciphisa iindleko zokupakisha kwamashishini;
(3) Ukubonakala kweglasi okungafihlisiyo kunokubonakalisa ngokulula umbala weziqulatho zebhotile. Ibhotile yeglasi yelabhotile yokupakisha yesiselo selizwe lam, iglasi ikwaluhlobo lwezinto zokupakisha ezinembali ende. Ngobuninzi bezinto zokupakisha ezithela emarikeni, izikhongozeli zegilasi zisesikhundla esibalulekileyo ekupakisheni isiselo, esingenakwahlulwa kwiimpawu zokupakisha ezingazukubekwa ezinye izinto zokupakisha.
(4) Ibhotile yeglasi ikhuselekile kwaye isempilweni, ayinabungozi kwaye ayinabungozi, inokumelana kakuhle nokumelana ne-asidi, kwaye inezinto ezizodwa zokupakisha kwishishini lewayini, ishishini lobisi, ishishini leoyile enokutya, ishishini lesiselo, njl. ubumuncu. Izinto ezinje ngemifuno kunye neziselo, ukupakisha kwiviniga;
(5) Ukongeza, ngenxa yokuba iibhotile zeglasi zikulungele ukuveliswa kwemigca yokuvelisa ngokuzenzekelayo kwamashishini, ukuphuculwa kwetekhnoloji yeglasi yasekhaya yokugcwalisa iteknoloji kunye nezixhobo kukhulile, kwaye ukupakishwa kwebhotile yeglasi kunenzuzo enkulu kwimveliso yasekhaya nakwiimarike zangaphandle.
Ebomini bethu, ibhiya sesona siselo sithandwa kakhulu kuba isidanga sayo asiphezulu kangako, kwaye sinencasa ngokugudileyo kwaye simnandi, kwaye akukho lula ukunxila xa usela. Kwangelo xesha, ibhiya igcwele ngamanye amaqamza. Iyenza ingcamle ngcono, kwaye inokusabela okungakumbi kwincam yolwimi, ke emva kokungena kwilizwe lethu, iwayini ikhawuleze yabamba abantu abancinci. Imakethi yotywala ithandwa ngabantu abaninzi abancinci, kodwa ukuba ufuna ukuhambisa ibhiya kwiindawo ezahlukeneyo kufuneka ufune ukupakisha. Zimbini izinto ezipakishwayo zotywala ezivenkileni, enye ibhiya kwiibhotile zeglasi, enye ibhiya ziinkonkxa. Nguwuphi umahluko phakathi kwezi zimbini? Ekuqaleni, ulutsha oluninzi kufuneka ukuba lwalucinga ukuba akukho mahluko phakathi kwezi zinto zimbini, kuba nje izinto zohlukileyo zahlukile. Ngapha koko, ukuba uyasazi isizathu sayo, kuyaqikelelwa ukuba awuyi kuthenga ibhiya engeyiyo ukuba usela ibhiya kwixa elizayo.
Sonke siyazi ukuba iminyaka elishumi elinambini phambi kweminyaka yobuntwana, uninzi lweenkonkxa kwimarike lwalungathandwa kangako, ngenxa yoko imarike yebhiya yayisemarikeni ngelo xesha, iglasi yeebhotile yayiyeyona iphambili, kwaye kule minyaka ilishumi idlulileyo, iinkonkxa iglasi ethe chu yatshintsha ibhiya. Kwiishelufa zevenkile ezinkulu okanye ezivenkileni, sihlala sibona ibhiya ezinkonkxeni. Ngenxa yexabiso eliphantsi, ubunzima obulula, kulula ukuyithwala, inokugcina ukuthembeka okungcono ngexesha lokuhamba, ke iinkonkxa zebhiya ziyathandwa ebantwini abaninzi. Ndilandela emveni kwe.
Kodwa ukuba inkqubo yemveliso yezolimo iya kwezinye iindawo zokupheka ubugcisa obuphezulu, uya kufumana zonke iintlobo zebhiya ezishelifini, phantse zonke ziziibhotile zeglasi, kwaye awufane ubone ibhiya ezinkonkxeni, kungoku ibhiya kwiibhotile zeglasi. ikwafana nebhiya ekumgangatho ophezulu. Kuqhubekani? Kuyavela ukuba ibhiya ekuqaleni ibila kwintsholongwane yengqolowa, ke ngoko ikharbon diokside okanye initrogen yongezwa ukucofa xa kugcwaliswa, kwaye ioksijini esebhotileni ikhutshwa kangangoko kunokwenzeka.
Ke ngoko, kwizinto zeenkonkxa kunye neebhotile zeglasi, siyabona ukuba yeyiphi impembelelo yoxinzelelo engcono. Ukutyeba okucacileyo kwebhotile yeglasi kukhulu kwaye komelele kuneenkonkxa. Uxinzelelo olunokuluthwala lukhulu kakhulu kunolo lweetoti. , Xa uxinzelelo lonyukile, uxinzelelo oluphezulu lunokongezwa, ukuze umgangatho webhiya ukhuselwe ngcono. Ngapha koko, iglasi ekuqaleni yinto enezinto ezinemichiza ezinzileyo, kwaye ayenzi ngokwamachiza kunye nebhiya esebhotileni. Nangona kunjalo, iinkonkxa ngokubanzi zenziwe ngealuminium-iron iron alloy as raw materials. Ezinye zinokwenzeka xa zidibana nebhiya. Ukuphendula, ekuhambeni kwexesha, incasa yebhiya iya kufumana utshintsho olukhulu kakhulu, iyenza ibhiya ingcamle kakubi kwaye inyibilikise.
Ke ukuba siyasela ibhiya kuba nje sifuna ukukhawuleza kunye nokukhawuleza, hayi abo banemigangatho yemfundo etyebileyo, phantsi kweemeko eziqhelekileyo, sikhetha ibhiya enkonkxiweyo, kuba asinakusukela ubunjani obuphezulu, kwaye asiseli kakhulu. Yiba ngakumbi. Nangona kunjalo, ukuba awuthatheli ngqalelo ubunzima kunye nokuphatheka, ngokwembono yokungcamla ibhiya, ibhiya kwiibhotile zeglasi ibhetele kuneebhiya ezinkonkxiweyo. Ke ngoko, ukuba sifuna ukungcamla umgangatho kunye nengcaciso yebhiya, kungcono ukhethe ibhiya ekumgangatho ophezulu kwiibhotile zeglasi.